बाक्लो हुस्सुले बिहानैदेखि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ उपत्यकामा बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लागेको छ। हुस्सुका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय दुवै उडान प्रभावित भएको छ। मुलुकका अन्य पहाडी र दुर्गम तथा तराई भेगको उडान पनि प्रभावित भएको छ। बिहान सबेरैदेखि बाक्लो हुस्सुले भिजिबिलिटी (दृश्य क्षमता) कम भएका कारण अ...
आठ महिनापछि भारत र बंगलादेशमा नियमित उडान सुरु गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाण्डौ । सरकारले भारत र बंगलादेशमा आठ महिनादेखि बन्द रहेको उडान पुनः नियमित गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हिजो बुधबार बसेको बैठकले ती दुवै मुलुकमा पुनः नियमित उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नियमित उडान सुरु गर्न दुवै मुलुकसँग कूटनीतिक पहल अगाडि...
काठमाण्डौ । फर्जी पाइलट लाइसेन्स प्रकरणमा विश्वका १८८ देशमा पाकिस्तानबाट सञ्चालित एयरलायन्समा उडान प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। पाकिस्तानी मिडियाहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईसीएओ) ले तोकेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना नहुनु र पाइटल लाइन्सेन्स वितरणमा घोटाला हुनुले पाकिस्तान...
– सिबी अधिकारी काठमाण्डौ । दसैँको संघारमा मुलुकको आन्तरिक उडानमा उत्साहजनक हवाई टिकट बुकिङ छैन। अघिल्ला वर्षहरुमा दसैँका लागि टिकट पाउन निकै सास्ती बेहोर्नुपथ्र्यो तर यसपटकको दसैँका लागि हवाई उडानमा बुकिङ सामान्य छ। काठमाण्डौबाट बाहिरका गन्तव्यमा एकतर्फी उडान सन्तोषजनक रहे पनि काठमाण्डौ फर्कदा जहाजको आधाभन्दा कम अकुपेन्सी...
पोखरा । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालसम्म ६४ प्रतिशत काम सकिएको छ। कोरोना कहर तथा बन्दाबन्दीका बीचमा समेत विमानस्थललाई बन्द गरेर आयोजनाको काम भइरहेकामा हालसम्म ‘एयर साइड’ तथा ‘ल्याण्ड साइड’ दुवैतर्फ गरी समग्रमा सो प्रतिशत बराबरको काम सकिएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना...
काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको अग्रणी हवाई सेवा प्रदायक संस्था यती एयरलाइन्सले आज बुधबारदेखि राजधानी काठमाण्डौ नजिकको सिमरा गन्तव्यमा उडान शुरु गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो २२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा घोषणा गरेबमोजिम १२ वर्षपछि बाराको सिमरा विमानस्थलमा उडान शुरु गरेको हो। यो यतीको नवौँ र प्रदेश नं २ मा दोस्र्रो गन्तव्य हो। ...
सिमरामा १२ वर्षपछि यतीले नियमित उडान थाल्दै, एकतर्फी भाडा रु. २८००
काठमाण्डौ । यती एयरलाइन्सले झन्डै १२ वर्षपछि काठमाण्डौ–सिमरा उडान पुनः सुरु गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रको यो वायुसेवा कम्पनीले आउँदो असोज २१ गतेदेखि काठमाण्डौ–सिमरा नियमित उडान पुनः सुरु गर्न लागेको हो। यसका लागि कम्पनीलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि अनुमति दिइसकेको छ। हाल कम्पनीले भरतपुर, पोखरा, जनकपुर, विराटनगर, भद्रपुर,...
मन्त्री भट्टराईको निर्देशन– ‘हिमालयलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु’
काठमाण्डौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालय एयरलाइन्सलाई भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नियामक नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकिरणलाई निर्देशन दिएका छन्। पर्यटनमन्त्री भट्टराईले आज आइतबार प्राधिकरणका महानिर्देशन राजन पोखरेललाई मन्त्रालयमा...
असोज १५ बाट खाडी मुलुकहरुमा नियमित उडान, कात्तिक १ बाट विदेशी पर्यटकलाई नेपाल खुला
काठमाण्डौ । सरकारले खाडी मुलुकहरु कतार, कुवेत र साउदीमा आउँदो अक्टोबर १ (असोज १५ गते) देखि नियमित उडान गर्ने भएको छ। अक्टोबर महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक गर्दै सरकारले यी खाडी मुलुकहरुमा नियमित उडान खोल्ने जानकारी दिएको छ। यसअघि सरकारले पीसीआर जाँच सहज नभएको भन्दै कतार, कुवेत र साउदीमा नियमित उडान खोलेको...
काठमाण्डौ । विश्व महामारी कोरोनाभाइरसका कारण झन्डै ६ महिनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई सेवा आज सोमबारबाट सुचारु भएको छ। सरकारले महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न गत वर्ष चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेको थियो। सोही दिनदेखि आन्तरिक हवाई सेवा पनि बन्द रहेको थियो। लकडाउन खुले पनि पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएका कारण गत भदौदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको...
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग उनको कार्यकक्षमा भेट गरी पर्यटन क्षेत्रले कोभिड १९ को कारणबाट व्यहोरिरहेको समस्याका बारेमा छलफल भएको छ । परिसंघको तर्फबाट अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको उपस्थिति थियो । छलफलमा वर्तमान...
काठमाण्डौ । झन्डै ६ महिनापछि खुल्न लागेको आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीहरुले बुकिङ खुलाउने तयारी सुरु गरे पनि गन्तव्य नतोकिएका कारण अन्योलमा परेका छन्। हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आउँदो असोज ५ गतेदेखि आन्तरिक उडान सुचारु गर्ने जनाएको छ। तर कुन–कुन गन्तव्यमा उडान खुल्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नपारेका कारण...
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : कति बन्यो, कहिलेदेखि नियमित उडान ?
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण लगभग सकिएको छ। अब विमानस्थलमा बत्ती, उपकरण जडानलगायत केही प्राविधिक काम मात्रै बाँकी छ। हालको अवधिमा विमानस्थलको ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत छ। कोभिड–१९ महामारी...